Data ahia: Igodo nke ikwusi na 2021 na gabiga | Martech Zone
N'oge ugbu a, ọ nweghị ihe ngọpụ maka amaghị onye ga-ere ngwaahịa na ọrụ gị, yana ihe ndị ahịa gị chọrọ. Site na mmalite nke ọdụ data na ahịa na teknụzụ ndị ọzọ data na-eduga, agafeela ụbọchị ahịa ezubere iche, ndị a na-achọghị, na ndị ahịa.
Echiche Dị mkpirikpi nke Akụkọ Mere Eme
Tupu 1995, a na-emekarị ahịa site na ozi na mgbasa ozi. Mgbe 1995 gasịrị, na ọbịbịa nke teknụzụ email, ahịa ghọrọ obere nkọwa. Ọ bụ na mbata nke smartphones, karịsịa iPhone na 2007, na ndị mmadụ malitere ịmalite ịmịnye ọdịnaya, ugbu a ọ dị mfe ịnweta ha. Ndị ọzọ smartphones rutere n'ahịa n'oge na-adịghị anya. Ọdịdị nke smartphone ahụ nyere ndị mmadụ ohere iburu ngwaọrụ ejiri aka rụọ ebe ọ bụla. Nke a dugara na data ịchọrọ njirimara dị oke ọnụ na-eme site na elekere. Mịpụta ọdịnaya dị mkpa na ijere ndị ziri ezi ozi malitere ịghọ usoro isi azụmaahịa maka azụmaahịa, ọ ka bụkwa ikpe ahụ.
Bịakwute 2019 ma na-ele anya gabiga ya, anyị na-ahụ na ndị ọrụ na-agagharị agagharị nke ukwuu na ịdabere na ngwaọrụ ha nwere. Enwere ike ijide data ahia taa n'oge ọ bụla nke usoro ịzụta. Maka ndị ahịa iji chọpụta ihe ndị ahịa ha chọrọ, ha kwesịrị ibu ụzọ mara ebe ha ga-achọ! Data nwere ike inye nghọta bara uru banyere ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta ndị ahịa, omume nchọgharị, ịzụrụ n'ịntanetị, usoro itinye ego na ego, isi ihe mgbu, mkpa oghere, na usoro ndị ọzọ dị oke egwu. Typedị ahịa ahịa a ga-abụrịrị isi ihe ọ bụla gbasara ahịa ahịa ọ bụla.
Ebumnuche Ebumnuche maka mkpokọta data nchịkọta
Ejila nchikọta data na-enweghị isi! Enwere ọnụọgụ ahịa data a na-apụghị imeri emeri dị n'ebe ahụ, ma ị na-achọkarị naanị akụkụ dị mkpa nke ya. Nchịkọta data kwesịrị ịdabere n'ụdị azụmahịa gị na ọkwa nke ụlọ ọrụ gị na-anọ na usoro mmepe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ mmalite gbasara ịmalite, mgbe ahụ ịkwesịrị ịnakọta ọtụtụ data dịgasị iche iche maka ebumnuche nyocha ahịa. Nke a nwere ike ịgụnye:
Iche otu adreesị ozi-e
Mmasị mgbasa ozi mmekọrịta
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ achọrọ
Nkezi ego ha na enweta
Ọnọdụ ndị ahịa
Firlọ ọrụ na azụmaahịa nwere ike ịnwe data data e kwuru na mbụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị ha mkpa ịnọgide na-emelite ụdị ndị a mgbe ha na-achịkọta data maka ndị ahịa ọhụrụ. Ha ga-elekwasị anya na ịchụso nzaghachi ndị ahịa bara uru ma nweta nghọta maka uru ngwaahịa dị adị site na data.
Ọzọkwa, maka mmalite, SMEs, na nnukwu ụlọ ọrụ, idebe ndekọ nke ụdị nkwukọrịta niile na ndị ahịa dị oke mkpa. Nke a ga - enyere ha aka ịhazi usoro nkwukọrịta dị mma na ndị ahịa.
Ọnụ Ọgụgụ Abụghị iegha
88% nke ndị na-ere ahịa na-eji data enwetara site na ndị ọzọ iji mee ka ndị ahịa ha nwee nghọta na nghọta, ebe 45% nke azụmaahịa na-eji ya iji nweta ndị ahịa ọhụrụ. A chọpụtakwara na ụlọ ọrụ ndị na-eji nnabata data na-eme ka data dị elu karịa ROI ha na azụmaahịa site ugboro ise ruo asatọ. Ndị na-ere ahịa karịrị ihe mgbaru ọsọ ha na-enweta na-eji usoro ịhazi data nke data 83% nke oge ahụ.
N’enweghi obi abụọ ọ bụla, ịre ahịa data dị oke mkpa maka ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ndị ziri ezi na 2020 na karịrị.
Uru nke Data Data
Ka anyị ghọta nke ọma uru ahịa, nke data na-ebugharị.
Mee ka usoro ahia gi mara - Data ahia ahia bu mbido nke na enye ndi oru ahia ohere imepụta atumatu ahia di iche site na nkwukọrịta ahaziri iche. Jiri nlezianya nyochaa data, a na-eme ka azụmaahịa mara nke ọma banyere mgbe ha ga-eziga ozi ahịa. Izi ezi n’oge na-enye ụlọ ọrụ ohere ime ka ndị na-azụ ahịa nwee mmetụta nke mmụọ, nke na-agba ume itinye aka na ya.
53% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ọchịchọ maka nkwukọrịta ahịa ndị ahịa dị elu.
MediaMath, Nyochaa zuru ụwa ọnụ nke Data-Marketing na Mgbasa Ozi
Na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa mara mma - Azụmaahịa na-enye ndị ahịa ozi bara ezigbo uru maka ha ga-eguzo na njikọ nke aka ha. Gini mere iji jiri ike kwalite ugbo ala egwuregwu nke 75 nke onye na-ere ugbo ala? Ebumnuche nke ahịa ahịa na-eduga maka mkpa ndị ahịa. Nke a na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa baa ọgaranya. Ire ahia, n’otu nnukwu, ka bụ egwuregwu ndị ọbịa, ahịa data na-enye ndị azụmaahịa ohere ịkọ nkọ amamịghe dị elu. Ahịa ahịa na-eduzi nwere ike inye ozi na-agbanwe agbanwe n'ofe nkwupụta ndị ahịa niile. Ọ na-enye ohere ka ịme ụdị Omnichannel ebe ị ga-akpọtụrụ ha site na mgbasa ozi mmekọrịta, mmekọrịta onwe gị, ma ọ bụ site na ekwentị, ndị na-azụ ahịa na-enweta otu ozi ahụ dị mkpa ma nwee otu ahụmịhe ahịa ahụ na ntanetị niile.
Na-enyere Aka Rightchọpụta Engbanye Aka na Akaụntụ - -re ahịa data na-enye ụlọ ọrụ ohere ịchọpụta nke ọwa ahịa nke na-eme nke kachasị mma maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ enyere. Maka ụfọdụ ndị ahịa, nkwukọrịta ngwaahịa site na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ nwere ike kpalite mmekọrịta na omume onye ọrụ achọrọ. Uzo ndi emeputara site na Facebook nwere ike imeghachi di iche karia uzo ndi Google Display Network (GDN). Ozi ahia na-enyekwa ulo oru aka ichoputa udiri ihe di n'ime ya nke kachasi nma na uzo ahia a choputara, ma obu obere akwukwo, ihe omuma, ihe ntanet, akwukwo, ma obu vidiyo.
Mma Ọdịnaya Ọdịnaya Ihe omuma ohuru na eme ka ndi mmadu choro ha kwa ubochi, ndi ahia gha aghale ya nke oma. Ihe omuma ahia na-agwa ndi ulo oru ka ha kpoo ma obu gbanwee usoro ahia ha di ugbu a dabere na mkpa ndi ahia ha na agbanwe agbanwe. Dị ka Steve Jobs kwuru, “'ve na-amalite na ahịa ahụmahụ na-arụ ọrụ azụ na nkà na ụzụ. You gaghị amalite na teknụzụ wee nwaa ịchọpụta ebe ị ga-ere ya ”. Site na ịghọta mkpa dị ike nke ndị ọrụ, ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ ga-etinye ndị ahịa ọhụrụ kamakwa ọ ga-ejigide ndị ochie. Ọdịnaya ọdịnaya dị oke mkpa maka nnweta ndị ahịa na njigide ndị ahịa.
Ga-amalite site na ahụmịhe ndị ahịa na-arụ ọrụ azụ na teknụzụ. You gaghị amalite na teknụzụ ma gbalịa chọpụta ebe ị ga-ere ya.
Na-enyere aka ile anya na asọmpi - A nwekwara ike iji data azụmaahịa maka ịlele ma nyochaa atụmatụ azụmaahịa gị. Ndị ọchụnta ego nwere ike ịchọpụta ụdị data ndị na-asọmpi mụọ ma kwuo amụma ha ga-ahọrọ iji zụọ ahịa ngwaahịa ha. Otu ụlọ ọrụ na-eji data amụ ndị na-asọmpi ya nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ nke ga-eme ka ha pụta n’elu. Iji data na-amụ ndị asọmpi na-enyekwa ụlọ ọrụ aka imeziwanye usoro ahịa ha ugbu a yana ịghara ime otu ihe ahụ ndị asọmpi ha mere.
Gbanwee Nghọta Na Omume
Ihe omuma ahia na enye ezi uche. Iji melite mkpọsa ahịa, ịkwesịrị ịma dịka ị nwere ike maka ndị ahịa gị. Zuru ezu nghazi bụ isi ihe ga-aga nke ọma na afọ na-abịa. Imejuputa atumatu ahia nke data na-eduzi nwere ike igbanwe uzo i si azuma ahia. N'agbanyeghi otu onye ahia ahia si ma ihe, ha apughi ime oru ebube nani. Ekwesiri inye ha ike site na ịrịọsi ike nke data azụmaahịa maka nsonaazụ dị elu.
Tags: azụmahịa2communitynyocha asọmpiọdịnaya ọdịnayaahụmahụ ahịanjikọ akaahia ọwaahịa datakeonweezubere ichemmasị onye ọrụ